जान्नुहोस् ! यस्ता छन् रोग लाग्नुका कारणहरु
रोग लाग्नुका कारणहरु
अप्रील 16, 2019 अप्रील 16, 2019 साइन्स इन्फोटेक9Comments डा. राम बहादुर बोहरा, रोग
बदलिदो जीवनशैली तथा गलत खानपानका कारण शरीरमा विभिन्न किसिमको रोग लाग्ने गर्छ । यसको मुख्य कारण भनेको अस्वस्थ्यकर खानपान तथा बदलिदो जीवनशैली नै प्रमुख हो । रोग लाग्नुको प्रमुख कारण भनेको शरीर कमजोर हुनुलाई प्रमुख मानिएको छ । हाम्रो शरीरलाई आवश्यक क्यालोरी पुरा हुनुपर्छ । जब हामीले खाना खान्छौं त्यति बेला हामीले नचपाई खाना खान्छौं भने यसले पाचनक्रिया खराब हुन थाल्दछ ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने तरिकाहरु
शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खानेकुराहरु र जडीबुटीहरु
नाडीद्वारा रोगको परीक्षण
टाउको दुखाईबाट पत्ता लाग्न सक्ने रोगहरू
पानीबाट रोगहरुको उपचार चिकित्सा विधि
खाना नचपाई खाएको खाना पचाउन हाम्रो शरीरभित्र रहेको एनर्जी खर्च हुने हुनाले चपाएर खाने बानी बसालौं । स्वास्थ्य धन हो भने सबैलाई थाहा छ तर लापरबाही खाना रोगको घर हो । बोलेर, टेलिभिजन हेरेर, खाना खादा र खाने बेलामा बढी पानी पिएमा यसले पाचनक्रिया समाप्त हुनाले ग्यास्ट्रिक रोग लाग्नाले कालान्तरमा ग्यास्ट्रिक बिग्रन गई पेटको अल्सर हुने खतरा बढ्न थाल्नेछ ।
कृतिम भिटामिन रोगको जड हो । यदि हामीले आवश्यक क्यालोरी फलफूल, साग सब्जीबाट प्राप्त गर्न सकेमा मानिसको आयु बढ्नुको साथै रोग लाग्नबाट समेत बच्नेछन् । नेपालीको आयु कम हुनु र चाडो बुढो हुनुमा खानपानमा पौष्टिक खानाको अभावलाई मानिएको छ । रक्सीको सेवन बढी गर्दा यसले स्नायु नसालाई क्षति गर्दछ । त्यही बस्तुलाई स्केलमा खान जानेमा डिप्रेसन, मानसिक रोग जस्ता समस्या हल हुन थाल्दछ ।
नेपालीले खान जान्दैनन् भन्नुको प्रमुख कारण यही हो । कुनै पनि शरीरलाई हामीले युज गर्दैनौं भने त्यसले फाइदा होइन बेफाइदा गर्दछ । शरीर स्वास्थ्य रहन व्यायाम आवश्यक छ । खाना खान्छौं तर आराम बढी गर्छौं भने बोसोको मात्रा बढ्न गई अनेक रोगको चपेटामा पर्नेछौं ।
डा. राम बहादुर बोहरा नेपाल वैकल्पिक चिकित्सा विकास परिषद नवलपरासीको अध्यक्ष, बरिष्ट आयुर्वेद डाक्टर तथा साइन्स इन्फोटेकका सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।
← तरकारी र फलफूलमा मिसाइने विषादिको परिक्षण हुन जरुरी
फ्रिजमा राखेको चिसो पानी पिउँदा स्वास्थ्यमा पर्ने असरहरु →
पारासिटामोल प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीहरु
फ्रेवुअरी 6, 2019 अप्रील 12, 2019 साइन्स इन्फोटेक 8
मे 25, 2019 मे 25, 2019 साइन्स इन्फोटेक 3
मानिसले किन दिन्छ पैसालाई महत्व ?
अगस्ट 17, 2019 अगस्ट 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
9 thoughts on “रोग लाग्नुका कारणहरु”
Pingback: जान्नुहोस् ! यस्ता छन् मानसिक तनावबाट मुक्त रहने उपायहरु
Pingback: रोग र औषधि
Pingback: घरेलु औषधिबाट कलेजोको रोगको उपचार
Pingback: जान्नुहोस् ! यस्ता छ नरिवल र यसको महत्व
Pingback: एक्सरे किन गरिन्छ ?
Pingback: कुन कुन अंगको अल्ट्रासाउण्ड (Ultrasound) किन र कसरी गरिन्छ ?
Pingback: थालासेमिया रोग र यसको उपचार - साइन्स इन्फोटेक
Pingback: इन्सेफेलाइटिस र यसको उपचार
Pingback: जान्नुहोस् ! यस्तो छ रोग निको हुने सुत्र
चम्सुरको साग खानुका फाइदाहरु
हस्तरेखा विज्ञान अनुसार धनी हुने ब्यक्तिका हातका रेखा हुन्छन् यस्ता
मुटु रोगको प्राकृतिक उपचार
के हो जमरा ?
Copyright © 2022 साइन्स इन्फोटेक. All rights reserved.